Manoloana ny fahafatesana nateraky ny herisetra manerana ny firenena, mitady fiarovana tsara kokoa ny Nizeriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2018 5:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, 繁體中文, Français, English
Sora-baventy miantso diabe ho any Aso Villa, toeram-piasana sy trano fonenan'ny filoha Nizeriana, ao an-drenivohitra Abuja, mba hanoherana ny famonoana tsy mitsahatra any Nizeria, jiona 2018.
Tamin'ny 23 Jiona 2018, nanafika tanàna 11 ireo lehilahy mitam-piadiana ary namono olona maherin'ny 200 teo akaikin'i Jos, renivohitry ny Fanjakana Plateau ao afovoan'i Nizeria, tsy nisy ny firotsahana an-tsehatra nataon'ny mpitandro filaminana, tao anatin'ny iray tamin'ireo fifandonana mihoson-drà indrindra.
Taorian'ny fanafihana tamin'ny 23 Jona, nilaza ny Nizeriana fa tena ampy izay ary niditra tao amin'ny media sosialy tamin'ny fampiasana ny tenirohy toy ny #MakeNigeriaSafeAgain sy #StoptheKillings mba hanoherana ny firongatry ny famonoana feno habibiana manerana ny firenena. Nidina an-dalambe tsikelikely kosa ny sasany.
Amin'ny maha-firenena be mponina indrindra any Afrika azy, izay miaina anaty fahantrana ny 87 tapitrisa amin'ny mponiny, tompon'andraikitra tamin'ny fitomboan'ny isan'ny fahafatesana feno herisetra tao amin'ny firenena ihany koa ny fikomian'ny Boko Haram, ny fifandonana eny amin'ny kaominina, ny asan-jiolahy ary ny endrika fifandonana hafa. Hatramin'ny volana Janoary 2018 farafahakeliny, olona 1 813 no novonoina nanerana ny fanjakana miisa 17 – avo roa heny tamin'ny olona 894 maty novonoina tamin'ny taona 2017 tany Nizeria.
Gimba Kakanda, mpanoratra sady mpanentana amin'ny fampahalalam-baovao, nidina an-dalambe niaraka tamin'ireo Nizeriana mpiray tanindrazana aminy mba haneho ny tsy fankasitrahany ary nilaza izao izy:
Here to ask our politicians for a better deal! #MakeNigeriaSafeAgainpic.twitter.com/YckqrcOs3F
Eto aho mba hangataka amin'ireo politisianintsika hanao fifampiraharahana tsara kokoa!
Nidina an-dalambe ihany koa i Dr. Oby Ezekwesili, minisitry ny fanabeazana teo aloha sady filoha lefitry ny Banky Mondialy:
NANAO DIABE nankany amin'ny Villa araka izay vitako aho mba hanohitra ny FOMBA TSY MAHOMBY ataon'ny ⁦@NGRPresident⁩ ⁦@MBuhari⁩ momba ny famonoana ataon'ny mpampihorohoro #TerroristsHerdsmenKillings.
Nanitsakitsaka ny zoko, naka ny soram-baventiko ny polisin'izy ireo, ny miaramilan'izy ireo sy ny SSS.
Tamin'ny alalan'ny kaontiny Twitter Africa Fact Zone, nilaza andiana sioka ilay mpanao dokambarotra efa nahazo loka sady manana hery mahataona, Isima Odeh:
3 no maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana nataon'ny kamiao tao Ojuelegba tamin'ny herinandro lasa
Maherin'ny 130 ireo maty tamin'ny krizin'ny Plateau
4 no maty tany Igbeagu, Ebonyi & Ukelle, fifandonana tao Cross River (Fiampitan-dRenirano)
Androany, fiara 30 mahery misy olona no may, raha kilan'ny afo teo amin'ny tetezan'i Otedola ny kamiao iray mpitatitra solika
Fifandonan'ny mpivaro-kena sy polisy tao Bodija, Oyo.
Nanatevin-daharana ihany koa ny fiarahamonim-pirenena:
We are with you, we care#PrayForPlateaupic.twitter.com/iWuhfnyjRp
Malahelo izahay noho ireo zava-nitranga tao amin'ny fanjakana Plateau izay namoizana an'olona an-jatony, kamboty sy maty vady.
Amin'ireny fotoam-pitsapana ireny, tokony hiray hina isika amin'ny maha vahoaka fa tsy hiady. Miray fo amin'ireo niharan-boina rehetra tamin'ireny fanafihana ireny izahay.
Miaraka aminareo izahay, miahy izahay
Na dia ny filoha lefitra teo aloha, Atiku Abubakar koa aza naneho ny fanamelohany ny tsy fahafahan'ny governemanta miaro ny olom-pireneny:
Famonoana tsy voahevitra eto amin'ny firenentsika, tsy afaka hijanona amin'ny fanohizana ny fandatsahan-drà sy ny fisaonana isika. Mila miarina amin'ny andraikiny voalohany amin'ny fiarovana ny aina sy ny fananana ny governemanta. Miray fo amin'ireo niharam-boina tao Barkin Ladi LGA ao amin'ny Fanjakana Plateau
Tamin'ny fanambarana an-gazety, nanatevin-daharana ny tabataba antserasera ny Amnesty International Nizeria:
Manana andraikitra hiaro ny aina sy ny fananana ny manampahefana, saingy tsy ampy mazava ny fandraisan'izy ireo andraikitra manoloana ny zava-mitranga. Tokony atao fanadihadiana ny loza farany tao amin'ny fanjakana Plateau, izay nisy ireo jiolahy mitam-piadiana nanafika tanàna 11 tamin'ny 23 Jona nandritra ny adiny fito farafahakeliny ary nahafaty mponina 200 raha kely indrindra, tsy nisy ny fidiran'ny mpitandro filaminana an-tsehatra.
Tao amin'ny Twitter, nizara ny saritanin'ny famonoana ihany koa ny ONG:
Nizeria: Mandrakitra an-tsaritany ny famonoana nisy nanerana an'i Nizeria nanomboka tamin'ny Janoary ka hatramin'ny 27 Jiona
Taorian'ny fiampangana goavana ny fanafihana tamin'ny 23 Jona, nitsidika tao Jos ny Filoha Muhammadu Buhari mba haneho ny fiaraha-mioriny. Tao anatin'ny kabariny ho an'ireo olom-pirenena nidònam-pahoriana, nidera ny governemantany i Buhari noho ny fitantanana ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny firenena, saingy nandrisika ny olom-pirenena mba hivavaka ho amin'ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra:
Tsy misy olona afaka milaza fa tsy nanao tsara teo amin'ny resaka fandriampahalemana isika, nanao izay tsara indrindra vitantsika isika, saingy manoloana ny toe-javatra misy ankehitriny, mivavaka no azontsika atao.
Vao maika nampiditra solika anaty afo ny fanamarihan'ny filoha, satria tsy manana izany ny olom-pirenena.
Nitsidika an'i Jos i Prez Buhari mba hilaza amin'ireo olona vao avy nandevina ny havany aman-tsakaizany an-jatony novonoina fa tsy misy azontsika atao fa tokony hivavaka amin'Andriamanitra izy ireo, na dia manana mpiambina marobe miaro azy aza izy. Maninona izy raha mandefa ny mpiambiny ho any Jos & hivavaka amin'Andriamanitra?
Noho ny fitomboan'ny fahasorenana ao amin'ny firenena, mitombo hatrany eo amin'ireo Nizeriana ny fitakiana ny fitantanana tsara sy ny fiarovana ny aina sy ny fananana. Ny fotoana ihany no hilaza hoe hihatsara ve ny zava-misy?